Grotto nke Shrine nke Lourdes - WRSP
NATIONAL SHRINE GROTTO NKE MGBE
NATIONAL SHRINE GROTTO NKE TIMELINE
1805: E wuru St. Mary's on the Hill, ụka Katọlik, ebe saịtị nke ugbu a.
1808: Ugwu E hiwere ụlọ akwụkwọ St. Mary's College (nke bụ ugwu St. Mary's University na Seminary St. Mary). Rev. John DuBois chọpụtara grotto nkịtị n'ugwu ahụ, ebe saịtị nke Emmitsburg ugbu a.
1858: St Bernadette kọrọ ọtụtụ usoro na Lourdes, France.
1875: Reverend John Waterson, onye isi oche nke Mt. wuru ụlọ a bụ grotto. Marylọ akwụkwọ St. Mary.
1891: Monsignor James Dunn nyere ego maka ihe oyiyi Lady anyị na niche dị elu karịa Grotto.
1906: E wuru Corpus Christi Chapel ebe "Old Grotto," nke Rev. DuBois chọpụtara, guzo ọtọ.
1913: St Mary nke dị n’elu ugwu gbara ọkụ.
1964: Pangborn Memorial Campanile, ụlọ mgbịrịgba nke ihe oyiyi ọla edo nke Nwanyị Nwanyị anyị, wuru na saịtị nke St Mary's na Hill.
1965: Kadịnal Shehan nke Baltimore kwupụtara Grotto bụ Ọha Ọha, wee họpụta Msgr. Hugh J. Phillips onye ụkọchukwu nke Grotto.
1976: E wuru Glass Chapel na saịtị ahụ.
2007: Bishop Jacques Perrier, bishọp nke Tarbes na Lourdes, nyere Emmitsburg Grotto onyinye nkume site na Lourdes Grotto. E wuru ya na mgbidi nkume nke Emmitsburg oyiri.
2013: Richard na Mary Lee Miller Family Visitors Center na St. Bernadette's Gift Shoppe meghere.
Ọtụtụ ndị Catholic Katọlik kwenyere na ebe Emmetburg dị pụrụ iche ọbụna tupu e wuo Grotto n'ebe ahụ. Ọ bụ saịtị nke narị afọ nke iri na asaa Marian pụtara nke otu nwoke American nwoke nke ghọrọ ndị Katọlik, na saịtị nke a usoro nke Marian nke oge a nke Gianna Talone Sullivan kwuru. Ndị Katọlik bi ebe ahụ kpọrọ akara ngosi dị na mpaghara ahụ "ugwu Mary" na "St. Ndagwurugwu Josef. ” Elizabeth Ann Seton biri ma rụọ ọrụ na Emmitsburg, ụlọ arụsị ya dịkwa na basilica n'obodo. Ugwu Mt. Mahadum St. Mary na Seminary, nke akpọrọ "Cradle of Bishops" maka ọnụọgụ ndị bishọp US bụ ndị gụsịrị akwụkwọ, hiwere na Emmitsburg na 1808.
Ebe nke Grotto n'onwe ya, n'ugwu di n'elu Mt. St. Mary's, bụ ebe dị nsọ maka ofufe. Ọ bụ ụlọ nke ụka, St Mary's on the Hill, nke e guzobere na 1805 ma nke Rev. John DuBois wuru. Fr. DuBois chọpụtara mmiri mmiri na grotto n'elu ugwu ahụ, ihe dị ka afọ iri ise tupu oge Lourdes apụta. St. Elizabeth Ann Seton (onye nsọ Katọlik mbụ a mụrụ na United States) kọrọ na ọ gara ije ma kpee ekpere n'ugwu ahụ. Kemgbe ntọala nke Mt. St. Mary's College na 1808, ndị seminarị arịgoro ugwu ahụ ikpe ekpere, na-eji ụzọ ụkwụ awara osisi, obe ndị gara aga etinyere n'osisi (Lombardi nd). Fr. Simon Gabriel Bruté, nke Mt. St. Mary, bụ onye ndu ndị a.
A na-ekwu Rev. John Waterson na ọ na-ewu ụlọ ntanetị na 1875, na agbakwunyere ihe oyiyi na ụlọ ndị ọzọ kemgbe oge ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọbịa gafere ebe a na-eli ozu St. Anthony na Mt. Ebe a na-eli ozu St. Mary na-arịgo ugwu dị nso na Grotto. Ozugbo n'ime ọnụ ụzọ ámá ahụ, enwere ebe a na-adọba ụgbọala na ụkwụ nke otu mgbịrịgba mgbịrịgba nke nwere nnukwu ihe oyiyi ọla edo nke Our Lady, Pangborn Campanile, nke na-agbanye "Immachara Mary" na abụ ndị ọzọ na etiti oge ụbọchị niile. Ihe oyiyi ọla edo a, nke a na-ahụ anya maka ọtụtụ kilomita gburugburu, bụ akara ngosi maka ụgbọ ala na-anya na Maryland Rt. 15 yana maka ụgbọ elu na-efega Camp David dị nso. N'elu ugwu gaa n'aka nri, otu ụlọ osisi nke onye na-elekọta ụlọ na narị afọ nke iri na itoolu nọ na-ele Frederick County anya. Chalọ uka nke St. Mary na Hill, ụlọ ekpere nke oge a nwere nnukwu windo na-amalite na 1976, na-anọdụ n'oche ebe a na-adọba ụgbọala. A na-akpọkarị “Glass Chapel,” Mass na-eme n'ụlọ ụka a kwa izu. Onwere onye obia ohuru diri ulo St. Bernadette Onyinye Shoppe dika. Offọdụ n'ime ogidi ndị dị na etiti onye ọbịa ahụ sitere na osisi ndị dara na ebe nchụaja n'oge Ajọ Ifufe Sandy na 2012; n'ụzọ ọrụ ebube, ọ dịghị ihe akpụrụ akpụ ma ọ bụ ụlọ ọ bụla mebiri emebi.
Nnukwu ọnụ ụzọ ámá na mosaics nke Lady anyị nke Guadalupe na Jizọs na-edeba ọnụ ụzọ nke ebe nsọ ahụ. Okporo ụzọ abụọ na-agafe n'etiti osisi: otu na-egosi obere alcoves na-egosipụta ebe obibi nke Cross, nke ọzọ bụ Mysteries of the Rosary. Ụzọ abụọ ahụ na-eduga na nnukwu ọdọ mmiri na ihe oyiyi nke Lady anyị n'etiti. Ihe oyiyi a, tinye ya na 1958 na ụbọchị 100 nke ihe ngosi Lourdes, bụ ihe atụ nke Lady Our Lady na Lourdes. N'akụkụ bụ mgbatị ebe ndị ọbịa na-enweta mmiri gọziri agọzi. Naanị ọdọ mmiri ahụ bụ obere ụlọ nkume, nke Corpus Cristi Chapel, mgbe ahụ, ọ bụ ihe oyiyi nke St. Bernadette na Lady anyị, bench, na ebe ịchụàjà na kandụl ofufe na akwụkwọ mpịakọta maka ekpere. Ihe ịrịba ama na-agwa ndị pilgrim banyere ụdị ọhụụ pụrụ iche e nyere onye ọ bụla na-eleta Grotto.
N'ikpeazụ, ụzọ dị mkpirikpi, nke dị n'ofe Grotto na-eduga na "Calvary Scene" na nnukwu ihe oyiyi metal. Gburugburu ebe a na-adọba ụgbọala na n'okporo ụzọ na-aga ije, ndị nsọ Katọlik na ndị ọzọ dị mkpa na-echeta na ihe oyiyi na ebe ndị dị elu. A na-arara ụlọ nsọ ndị a nye ọnụ ọgụgụ dị iche iche, gụnyere John Paul II, St. Theresa nke nwa Jesus, Padre Pio, St. Jude, St. Faustina, na St. Elizabeth Ann Seton. Enwerekwa ebe nsọpụrụ nye Lady anyị, n'okpuru utu aha dị iche iche: Lady anyị nke Grace, Lady anyị nke Fatima, Pieta, na Virgin nke ndị dara ogbenye (Banneux, Belgium).
Nke a bụ ebe ndị njem nleta Katọlik, nke a maara nke ọma n'etiti obodo dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ, na-akọ n'etiti 200,000 na 400,000 ọbịa kwa afọ. Ọnụ ọgụgụ ndị a bụ atụmatụ; ugbu a, a na-agụnye ndị ọbịa na nzuzo ma ọ bụrụ na ndị ọrụ Grotto tally ọnụ ọgụgụ nke ụgbọala na-adọba ụgbọala. Nkwụsị izu izu ike nwere ike ịbịaru ndị ọbịa 3,000, mana ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na-abịa kwa afọ. Ndị ọbịa ụfọdụ bịarutere n'oge ifufe nke snow; ndị ọrụ ahụ na-eme mkpesa site n'aka ndị ọbịa mgbe Grotto ga-ekpuchi n'oge ihu igwe. Ndị ọbịa dị iche iche dị iche iche na ọdịiche dịgasị iche: Herpanic, ọcha na-abụghị Hispanic, na Eshia (karịsịa Vietnamese) ọbịa bụ ndị nkịtị, dịka ndị toro eto, ndị na-eto eto, na ezinụlọ nwere ụmụ. Ndị ọbịa si gburugburu United States, ma ha niile abụghị ndị Katọlik ma ọ bụ Ndị Kraịst.
Grotto bụ ebe ndị njem uka Katọlik dị na mgbada nke Mt. St. Mary’s, mahadum ndị Katọlik. Nkwenkwe ndị a kwadoro na saịtị ahụ kwekọrọ na nkuzi nke ndị isi ụka.
Ụdị ihe oyiyi dịgasị iche iche na-agba akaebe banyere ọtụtụ nnọchianya ndị a na-etinye na shrine. Ọ bụ mba niile; ihe oyiyi nke Lady anyị nke Lavang, Padre Pio, St. Faustina, Nwanyị anyị nke Guadalupe, na Lady anyị nke Medjugorje na-egosipụta ụdị dị iche iche nke ndị ọbịa na Grotto.
Ndị Katọlik nọ na mpaghara ahụ na-ekwu maka ọnụnọ nke Nwanyị anyị n'ozuzu ha, yana mkpa ọ dị maka kampanile tinye ya na ọla edo anyị ọkachasị. Ruo ọtụtụ afọ, ọkụ mmiri na-enwu gbaa ogige na mgbede ruo mgbe ndị ọrụ Grotto kpebiri ịchekwa ego site na ịgbanyụ ọkụ. N'oge na-adịghị anya, onye ọrụ gọọmentị kpọtụrụ Mt. Mahadum St. Mary na-arịọ ka agbanye ọkụ: ndị ọkwọ ụgbọ elu na-efegharị na Camp David dị nso chọrọ ogige maka ọkụ iji duzie ha.
Omume nke ndị ọbịa bụ ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị Katọlik ji okpukpe kpọrọ ihe: ikpe ekpere Rosary, ịhazi Stations of the Cross na Rosary ije, ikpe ekpere, na ịga Mas na Glass Chapel. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-agagharị na saịtị ahụ, ezinụlọ na-ebubata nri ehihie ha ka ha rie na bench oche osisi dị n'akụkụ ebe a na-adọba ụgbọala.
Omume a na-emekarị na ekpere, karịsịa ekpere maka ịgwọ ọrịa. Ndị pilgrim na-azụta kandụl ka ha gaa na nnukwu Grotto, ọ na-ahụkarị ọtụtụ kandụl na-ada n'azụ ebe ịchụàjà. Akwụkwọ mpempe akwụkwọ maka arịrịọ ekpere dịnụ; a na-anakọta ha na izu ọ bụla ka onye nchụàjà na-eme Mass na Glass Chapel nwere ike ikpe ekpere n'elu ha. Ndị pilgrim na-ekpe ekpere maka ọgwụgwọ (mmetụta uche na anụ ahụ) na ndị òtù ezinụlọ ịlaghachi na Chọọchị; mgbe mgbe otutu ndi mmadu laghachiri ichi egwu ichota Nne anyi di aso n'ekpere Jisos. Ndị ọbịa ole na ole na-akọ na ha natara Nwunye Nwanyị anyị ma ọ bụ hụ ndị ezinụlọ nwụrụ anwụ na saịtị ahụ, ọ bụ ezie na Grotto anaghị eme ndekọ akụkọ nke akụkọ ndị a ma ọ bụ na-agbalị ịnwapụta ha.
Na otu akụkọ pụrụ iche, otu nwanyị wepụtara akpa ego ego na Grotto, ihe ruru $ 40,000. Ọ na-etinye akpa ego ya n'okpuru ụfọdụ akwụkwọ n'akụkụ ihe oyiyi, na-eche na ha ga-enwe nchebe n'ebe ahụ. Otu onye ọrụ na-achọpụta akpa ahụ, na mbụ na-eche na mmadụ enyefela nnukwu ụlọ onyinye ahụ. Onye nwe ego a na-agbanyeghị, laghachiri weghachite ha ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị, na-akọwa na ọ chọghị ịhapụ ha n'ụlọ ya mgbe ọ na-apụ (Stern 2009).
Omume nke ịnakọta mmiri site na saịtị ahụ ma ọ bụ ịsa ahụ n'ime ọdọ mmiri, nke a na-ahụkarị na Lourdes, bụkwa ihe a na-ahụkarị na Emmitsburg. Ndị njem ala nsọ na-eweta karama mmiri iji kpokọta mmiri mmiri site na saịtị Emmitsburg, ọ bụghịkwa ihe a na-ahụkarị maka ndị njem na-eji ụgbọ mmiri na-akpọga galọn mmiri mmiri. Onyinye St. Bernadette Shoppe na-ere karama efu nke nha dị iche iche maka ndị njem ala nsọ echefuru nke ha; ụfọdụ karama ndị a dị ka St Bernadette gbuo ikpere n’ala n’ihu Nwanyị Nwanyị Lourdes. Ọ dị ka ndị njem ala nsọ na-emeso mmiri ahụ site na saịtị Emmitsburg dị ka ndị njem ala nsọ na-emeso mmiri Lourdes, ụfọdụ egosila ngọzi ndị metụtara mmiri a.
Emmitsburg Grotto gara n'ihu na-echeta emume 1858 pụtara na St Bernadette nwere ọrụ pụrụ iche, dịka Anointing of the Sick na February 11, ụbọchị mbido St. Bernadette mbụ. Emmitsburg Grotto na-egosiputa nkume sitere na saịtị Lourdes pụtara nke ọma, na ihu nkume nke Grotto nke ya. Shoplọ ahịa onyinye ahụ, nke akpọrọ maka onye ọhụụ Lourdes, gosipụtara mgbidi dum nke shelf na ihe sitere na Lourdes, gụnyere mmiri Lourdes na ngwaahịa ndị e ji mmiri Lourdes mee; ihe akpụrụ akpụ, ihe ndọta, kandụl, na kaadị ekpere nke St. Bernadette na Lady anyị nke Lourdes; na akwukwo na ihe nkiri banyere nkpuru obi Lourdes.
Ụka dị na mpaghara haziri pilgrimages na Grotto. Na 2014, njem abụọ nke otu ụka Vietnamese ga-eji n'etiti 3,000 na 5,000 bịa. Ufodu njem ncheghari di iche iche na-agunye onye oku ka ha wee nwee ike eme ememe Nkume n'oge ha na njem ha na Grotto.
Ndị pilgrim na-enyekwa ego maka oche maka icheta ndị ha hụrụ n'anya ma ọ bụ rara osisi nye ha nsọpụrụ. Plaques na-egosi na windo (na Corpus Christi Chapel), ihe oyiyi, oche, na osisi esoworo ma ọ bụ nye ndị mmadụ niile n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, si Florida na New York.
Grotto na-elekọtazi Mt. Ebe a na-eli ozu Mary ma na-ere oghere na columbaria ọhụrụ.
Rev. John DuBois, onye ụkọchukwu nke bịara n'ógbè Emmetburg na narị afọ nke 19, a na-ewere ya dị ka onye ndú na ntọala nke onye Grotto. A na-enye ya otuto maka ịwụdo obe na saịtị dị ugbu a nke "Calvary Scene," ọ bụ ezie na ọ hụghị ụlọ arụsị kwa otu; n'ezie, ọbụghị afọ iri ise ọzọ ka St Bernadette kọrọ akụkọ ọhụhụ nke Nwanyị anyị. Fr. Simon Gabriel Bruté, ya na ndi seminarị ndị ọzọ na Mt. Meri, kpochapụrụ ụzọ ụkwụ na-aga n'akụkụ ugwu ma tinye obe n'elu osisi ka ndị ọbịa wee nwee ike ịga ebe ahụ wee kpee ekpere (Lombardi nd).
Rev. John Waterson wuru oyiri nke Lourdes grotto na Emmitsburg na 1875 (Mount Saint Mary's University nd).
Msgr. Hugh J. Phillips, onye ụkọchukwu nke Grotto, na-egosi ọtụtụ ọganihu na saịtị ahụ (Kelly 2004). E nyere ya aka gbasaa okpukpere chi ma mee ka ndi mmadu biakwuo ya, ndi Amleto cardinal Cicognani, onye bu onye ozi Apostolic na United States, kwuru ugboro ugboro. Ọ bụ Cardinal Cicognani onye haziri Pope Paul nke VI na 1950s ka e nye ndị pilgrim ọrụ na Emmitburg Grotto.
Ka ọ dị ugbu a, onye ndu nke saịtị Grotto dabara n'aka ndị isi oche, ndị seminarị si na Mt. Mary, na Student Grotto Team, gụnyere ụmụ akwụkwọ si na Mt. St. Mary nke na-eduga Grotto ịgagharị ma nyere ndị njem ala nsọ aka.
Grotto enwewo nsogbu ụfọdụ na-emepe ma na-echekwa saịtị ahụ. N’oge afọ mbụ ya, Grotto dị larịị; Enweghi ike iru ebe ahu ma ewezuga ndi di ike kari ndi ugwu. Kemgbe ọtụtụ afọ (na ọkachasị n’ime iri afọ ole na ole gara aga) saịtị ahụ abụrụla ebe dị mfe ịnweta. Ka ọ dị ugbu a, nchekwa bụ nchegbu bụ isi maka ndị ọrụ Grotto: a ga-ahapụrịrị ịga ije na ice na irighiri ihe, a ga-edobekwa ndị na-agba ụkwụ. Ebe a na-adọba ụgbọala na mpụga etiti ndị ọbịa emechila ka e nwee ike mepee ebe ahụ maka ndị ji ụkwụ aga; ọ dị oke egwu na ndị ọbịa (gụnyere ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na njem njegharị) na-agagharị ebe a na-adọba ụgbọala mgbe ụgbọ ala na-adọba ụgbọala. Ndị ọbịa abịaziri ebe a gafere ebe a na-eli ozu St. Anthony ma jee ije dị nso na ebe ndị ọbịa bịara. Onye nyere onyinye nyeere Grotto aka ịzụ ụgbọ ala gọọlfụ iji rụọ ọrụ mgbagharị maka ndị ọbịa na-enweghị ike ịga ebe dị anya, ma ọ bụ ndị chọrọ enyemaka iji nweta mpaghara ndị ọzọ nke saịtị ahụ. All ndozi ndị a chọrọ ego, yabụ na nkwado ego abụwo nnukwu nsogbu na oge. Kemgbe oge Msgr. Phillips, enweela nnukwu mmepe na saịtị ahụ, na Grotto na-adabere na onyinye maka mmelite yana ndozi.
Nchegbu ọzọ maka Grotto Director Lori Stewart bụ ime ka ndị ọbịa mara na Grotto nwere mmekọ na Mt. Mahadum St. Mary na akụkọ ihe mere eme pụrụ iche. Fọdụ ndị ọbịa amaghị maka njikọ a, ụfọdụ ụmụ akwụkwọ amataghị na Grotto dị nso na kọleji ha ma ọ bụ na ha achọghị ịrị ugwu dị elu iji gaa.
N'ikpeazụ, Grotto na-achọ onye ụkọchukwu nke ga-ekewa oge n'etiti Grotto na Mt. Ogige Mary. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu njem njem ga-akpọrọ onye ụkọchukwu ma ọ bụrụ na ha chọrọ ime Mas na shrine n'oge nleta ha. Grotto ga-achọ inwe ike ịhazi ịlaghachi na njem njem kama ị ga-ahazi ndị otu ahazila onwe ha. O yikarịrị ka a ga-ekenye ndị ụkọchukwu na parish kama ịbụ saịtị dị ka Grotto, yabụ, ya mere ịchọta ụkọchukwu abụwo ọgụ na mgba.
Lombardi, Fr. Jack. (nd) Ụlọ nsọ nke National Lady nke Lourdes. Nbanye Mar 17, 2014 si www.emmitsburg.net/grotto/index.htm.
Kelly, Jacques. 2004. "Monsignor Hugh J. Phillips, 97, Onye isi oche ugwu Saint Mary Mary." The Baltimore Sun , July 13. Nweta site na http://articles.baltimoresun.com/2004-07-13/news/0407130046_1_monsignor-mount-st-mary-college. na 3 April 2014.
Ugwu Mt. Mahadum St. Mary. nd Grotto National Shrine nke Lourdes. Nweta site na http://www.msmary.edu/grotto/ na 17 March 2014.
Stern, Nicholas C. 2009. “Nwanyị Hapuru $ 40,000 na Mkpụrụ ego Bara Uru na Grotto Maka Nchekwa.” Frederick News Post, November 19. Nweta site na http://www.fredericknewspost.com/archive/woman-leaves-in-valuable-coins-at-grotto-for-safekeeping/article_3a26af60-a0ec-5498-bbd3-40e64a15d2d2.html na 10 April 2014.